Sababa ku diidi kara inaad Guusha Gaadho.
April 1, 2017 No Comments Maqaal 1,027 views
Markay dhacdo inaad Hawlo badan aad ku guul daraysato ha quusan hana Raja dhigin Maxaa yeelay rafaad walba waxaa ka dambeya guul, Cunuga marka uu yar yar ee u socod Baradka yahay waxa uu kaca oo uu ku faa Dhawr jeer, balse mudo kadib waxa uu bilaabaa in uu caadi u socdo, adiga ma waxaad ka liidataa cunugaa yar ee Socod baradka. Mar walba oo aad ka quusato Guushaada waxay sababtaa in aad Horumar ka gaari waydo hawshada, ku dadaal inaadn marna ka quusan wadada aad ku gaari lahayd Guushaada, u wajah caqabada ku soo wajaha si kalsoni ay ku dheehantahay.
Gushu maaha inaad gaarto kaliya meesha rabtay balse waa in gushadu noqotaa mid wax tar u leh Naftada Diintaada Dadkaaga Dalkaaga iyo Naftaadaba, balse yay Guushaadu noqodn mid an wax Faa,ida laahyn. Inta aad ku guda jirto Wadada aad ku gaarayso Gushaada waxaad la kulmaysa Qabado badan kuwaas oo ka soo horjeeda Guushaada iyo Horumarka aad rabto inaad ka gaarto Nolosha.
W/Q:- Qoraa Said Maahd Mohamed.